SEE EXAM कहिलेदेखि हुन्छ ? परिक्षा केन्द्र कहाँ ? 11 र 12 को परिक्षा कहिले ? स्कुल कहिलेदेखि खुल्छ (भिडियो हेर्नुस) – दैनिक नेपाल न्युज
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अन्तिम समयमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थगित भएपछि झण्डै पाँच लाख विद्यार्थी अन्योलमा छन् । परीक्षा स्थगित भएको एक महिना पुगिसक्यो । तर, न लकडाउन खुल्ने संकेत देखिन्छ, न तत्काल परीक्षा गर्ने अवस्था छ । पछिल्लोपटक सरकारले गरेको निर्णयअनुसार वैशाख १५ सम्म लकडाउन कायम रहनेछ ।
त्यसपछि पनि लकडाउन खुल्ने/नखुल्ने यसै भन्न सकिन्न । यसले परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थी र अभिभावकमा एसईई परीक्षा के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । सरकारको अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा ढिलो चाँडो परीक्षा गर्ने नै देखिन्छ । परीक्षा गर्नुको विकल्प पनि छैन ।
परीक्षा कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राय दिन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाइएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको अहिलेसम्मको तयारी भने लकडाउन खुलेको तीन सातापछि एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने रहेको स्रोतले बताएको छ । SEE EXAM कहिलेदेखि हुन्छ ? परिक्षा केन्द्र कहाँ ? 11 र 12 को परिक्षा कहिले ? स्कुल कहिलेदेखि खुल्छ ?(भिडियो हेर्नुस)